Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1078
Par Taratra sur 04/06/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Mpanao gazety, miisa 8 mianadahy no nahatontosa fiofanana, mahakasika ny tontolon’ny fanoloram-baovao amin’ny fahitalavitra. Nizara ny traikefany, tamin’izany, Jean-Claude Allanic, ilay mpanolotra vaovao tao amin’ny France 2. Maro ny lohahevitra nodinihina sy nohalalinina, nandritra ny herinandro niatrehan’izy ireo izany, toy ny fomba fipetraka, manoloana ny «camera», ny fitondrana adihevitra, ny fampitam-baovao tselatra. Narahina fampiarana hatrany […]
« Festival des baleines » : handray anjara ny Star
Hotontosaina ny 2 hatramin’ny 10 jolay ho avy izao, any amin’ny Nosy Sainte Marie ny andiany faharoa amin’ny « Festival des baleines ». Tsy miova ny tanjona, ny fampandraisana andraikitra ny rehetra amin’ny fiarovana ireo trozona sy ny tontolo ivelarany. Noho izany indrindra, fantatra fa hitondra ny anjara birikiny amin’ny hetsika ny orinasa Star. Hivelatra bebe kokoa […]
Rugby – Can 1-B : 3FB 13 tafiditra ao amin’ny Makis
Par Taratra sur 04/06/2016 Divers, NS Malagasy
Nivoaka ny lisitr’ireo mpilalao mandrafitra ny ekipam-pirenena eo amin’ny taranja rugby na Makis de Madagascar hiatrika ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, taranja rugby, sokajy 1-B, na “Can 1-B 2016”. Araka ny efa fantatra, eto Madagasikara, etsy Mahamasina no hanatanterahana ny fifanintsanana isam-bondrona ho an’ny vondrona misy an’i Madagasikara sy Zambia ary Sénégal, ny 12, 15 […]
Fifidianana filohan’ny Efoi-Madagascar : kandidà tokana Razakaboana Fanja
Hotanterahina, anio ao amin’ny efitranon’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo (CCIA), izany ny fifidianana izay ho filoha vaovao hitantana ny Efoi-Madagascar. Tokana ihany, hatramin’ny fe-potoana farany omaly, ny kandidà nilatsaka hofidina, Fanja Razakaboana, avy eto amin’ny faritra Antananarivo. Hanao izany fifidianana izany ireo filoha isam-paritra 15 manerana ny Nosy. Nanomana izao fifidianana izao […]
Foara etsy Analakely : maro ireo mpandray anjara
Tanterahina ny 10 sy ny 11 jona ho avy izao ny Foaran’ny divay sy ny fromazy etsy amin’ny efitrano malalaky ny lapan’ny Tanàna Analakely, natokana ho an’ny daholobe. Maherin’ny 30 ny mpandray anjara ho an’ny divay, toy ny orinasa Soredim, ny Malaza, ny Dookan, ny Chan foi, sns. Ho hita amin’ireo fotoana ireo koa ny […]
BFV-SG : tolotra manokana mandritra ny ITM
Mandray anjara etsy amin’ny Foara iraisam-pirenena momba ny fizahantany (ITM), Carlton Anosy (2-4 jona ny banky BFV-SG etsy amin’ny Carlton Anosy (2-4 jona). Ho an’ny findramam-bola Soafeno, haingana sy hamoraina ny fikarakarana ny antontan-taratasy, fampihenana isa roa ny zanabola. Manampy ireo, maimaimpoana ny fangatahana karatra banky (poinsettia, varongy, ebène), ny findramam-bola ho an’ny mpiasam-panjakana (pack […]
Nanome toky ny minisitra Zafilahy : “Manohana an’Ambatovy ny fanjakana” #canada #sherrit #ambatovy
Par Taratra sur 04/06/2016 Economie, NS Malagasy
Fanaon’ny tetikasa Ambatovy ny mikarakara varavarana misokatra eto Antananarivo sy any Toamasina. Ahalalana bebe kokoa ity orinasa ity izany, sady hisorohana ny honohono sy ny tsaho ihany koa. Nosantarina ny alakamisy 2 jona teo ny varavarana misokatra ataon’ny Tetikasa Ambatovy etsy amin’ny gara Soarano. Nambaran’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika, Zafilahy Ying […]
Miralenta : betsaka ny lalàna mila ovaina
Vita omaly tetsy amin’ny Ibis Ankorondrano ny atrikasa famolavolana ireo hevi-baventy mikasika ny miralenta sy ny fampandrosoana izay hampifandraisina amin’ny tanjon’ny fampandrosoana maharitra na ny ODD. Notohanan’ny vondrona Afrikanina ara-teknika sy ara-bola ity atrikasa momba ny fifanarahan’ny Sadc mikasika ny miralenta sy ny fampandrosoana ity. Niray feo araka izany ireo minisitera maro sy ny fikambanana […]
« Pylone» fifandraisan-davitra : tsy misy ahina ny amin’ny fahasalamam-bahoaka
Maro ireo adihevitra manodidina ny fiantraikan’ny saha elektromanetika eo amin’ny fahasalamam-bahoaka hatramin’ny nidiran’ny teknolojia vaovao eo amin’ny fifandraisan-davitra sy ny serasera. Inona no tena marina ? Natsangana ny komity ad-hoc ao amin’ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra handraisana, hamahana, ary hamaliana ireo olana sy fitarainana rehetra voaray mahakasika ny saha elektromanetika. Hatramin’ny nisiany, efa nisy ny […]
Ambohimahasoa : kamiaobe nivadika tany anaty hantsana, naratra ny mpamily
Naratra ny mpamilin’ilay kamiaobe nivadika tany anaty hantsana ao Ambohimahasoa, afakomaly. Nihotsaka tampoka ny sisin’arabe nandehanan’ilay kamiaobe ka nivadika avy hatrany… Patte Apollo tanaty baoritra maromaro no nentin’ity kamiaobe nivadika tao Ambohimahasoa, afakomaly. Araka ny loharanom-baovao voaray, nifanena tamina taksiborosy iray nandeha mafy sady nangalatra tany amin’ny ankavanana ity kamiaobe niharan-doza ity. Niezaka naka sisiny […]
Karohin’ny polisy fatratra : ”Wanted” i Princy, mpanao kidnapping karana
Raha vao afakomaly ny nisy karana roa lahy nisy naka an-keriny, miala any ny anarana vaovao mpanao kidnapping : i Princy, “Wanted’ izy io, voalaza fa jiolahy mpaka an-keriny raindahiny. Manoloana ny firongatry ny asan-jiolahy sy ny fakana an-keriny teto an-drenivohitra sy ny manodidina, nanao ezaka manokana ny sampana misahana ny heloka bevava (BC) eo […]
Par Taratra sur 04/06/2016 En Bref, NS Malagasy
Nitondra fanazavana momba ny fahamaizana tao amin’ny Trano printim-pirenena ny tale jeneralin’ny trano printim-pirenena Jean Angelson Andriamboavonjy fa manahy ny mety hisian’ny famonoana ny orinasa iny zava-nitranga iny. Nilaza izy fa efa esorina tsikelikely ireo asa sasan-tsasany izay tokony hosahanin’ny trano printim-pirenena. Mbola ao anatin’ny fanadihadiana rahateo ny polisy misahana ny heloka bevava momba ity […]
Raharaha primatiora : miroso ny famotorana
Natao omaly teny amin’ny zandarimaria Fiadanana ny fakana am-bavany ireo olona niasa teny amin’ny primatiora Mahazoarivo nandritra ny fahavarezan’ilay vola tao amin’ny biraon’ny “trésorerie” ny fiandohan’ny herinandro teo. Fantatra fa anisan’ny nanaovana fanadihadiana tamin’izany ilay mpitambola sy ireo miaramila rehetra niasa tamin’io fotoana io. Anisan’izany natao famotorana koa ny kapiteny iray. Tsy nisy nipika ny […]
Miantso fitoniana amin’ny faha-56 taon’ny Fahaleovantena ny tafika. Navoitran’ireo Komity mpikarakara ny fetim-pirenena fa homarihina ao anaty fitoniana sy miavaka ary am-pahendrena izany. Hisy ny hetsika samihafa. Seho an-tsehatra ; ny matso ; ny afomanga amin’ireo distrika 88 sy ny faritra 22. Ho hentitra koa ny fitandroana ny filaminana. Niombon-kevitra amin’ny fiaraha-mitady vahaolana ireo ben’ny Tanàna avy amin’ireo […]
Lalam-pirenena manerana ny Nosy : raikitra ny hetsiky ny zandary hisamborana an’i Lylison
Par Taratra sur 04/06/2016 La Une, NS Malagasy, NS-Politique
Miala any ny baiko. Araka ny loharanom-baovao, nomena toromarika hihetsika avokoa ny mpitandro filaminana, indrindra ireo eny anivon’ny lalàm-pirenena hikaroka sy hitady ary hanao savahao ny mety ahitana ny loholona Lylison. Mbola mifamahofaho anefa ny raharaha. Niainga nanomboka afakomaly io teny midina io. Voalaza fa apetraka avokoa ny sakana rehetra amin’ireo fiara sy ny toerana […]
Run – Mada 2016 : dingana fahatelo ny « King of Mada »
Par Taratra sur 03/06/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hangotraka ny hetsika. Hiroso amin’ny dingana fahatelo sahady ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny run fiarakodia. Araka izany, hotanterahin’ny klioba Runmada, ny 24 jolay izao, eny amin’ny Batac Arivonimamo, ity dingana fahatelo ity, izay hiarahan’izy ireo amin’ny orinasa Galana G-Lubrifiant Engen. Hiavaka ny fifaninanana amin’ity indray mitoraka ity. Ankoatra ny fifaninanana run fiarakodia amina […]
Basikety : hanomboka ny fiofanana ho mpitsara
Par Taratra sur 03/06/2016 Divers, NS Malagasy
Raikitra. Hanomboka ny andiany voalohany amin’ny hetsika fampiofanana na/sy fampianarana ho mpitsara basikety ny federasiona malagasy (FMBB), ny asabotsy 4 jona izao, eny amin’ny birao foiben’ny federasiona ihany, eny 67 ha. Raha ny fanazavana, intelo miantoana io fampianarana io. Izany hoe, isaky ny asabotsy, manomboka ny 4 jona, 11 jona ary 28 jona izao. Araka […]
Mihatsara hatrany. Namono ny zava-bita tsara indrindra nasionaly, izay vitany teo aloha, i Saholinirina Eliane teo amin’ny 3.000 m steeple, taranja atletisma. Tany Montbéliard no nahavitany izany. Nanamafy ny maha laharana voalohany nasionaly azy eo amin’ny taranja atletsima i Saholinirina Eliane. Raha ny fampitam-baovao mantsy, namono ny “record de Madagascar” na zava-bita tsara indrindra nasionaly […]
Telma : manohana ny fizahantany ny fifandraisan-davitra
Manana ny lanjany amin’ny fampiroboroboana ny fizahantany ny lafiny fifandraisan-davitra. Voalohany amin’izany ny orinasa Telma, satria ananany ny fotodrafitrasa ilaina amin’izany, satria miparitaka manerana ny Nosy ny tambajotrany sady matanjaka rahateo. Anisan’izany ny tambajotra Backbone, mampifandray ny toerana samihafa eto Madagasikara, miainga avy any amin’ny tambajotra iraisam-pirenena. Mpanohana mivantana ny Foara iraisam-pirenena ho an’ny fizahantany […]
Sadc-Miralenta : ampanarahina ny ODD ny tanjona
Par Taratra sur 03/06/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Tanterahina etsy amin’ny Ibis Ankorondrano mandritra ny roa andro ny atrikasa fandravonana ny hevitra mikasika ny miralenta hifanaraka amin’ny toetrandro sy ny tanjona hotratrarina. Iarahana amin’ny biraom-pifandraisan’ny Vondrona afrikanina sy ny minisiteran’ny Mponina ny atrikasa. Tamin’ny taona 2008, efa nanao sonia hanatratra ny tanjon’ny taonarivo fahatelo na ny OMD i Madagasikara mahakasika ny fampiharana ny […]
ITM 2016 : « Kely ny vola hampiroboroboana ny fizahantany », hoy ny PCA-n’ny ONTM
Par Taratra sur 03/06/2016 Economie, NS Malagasy
Mila ezaka sy fampiasam-bola maro ny fampiroboroboana ny fizahantany. Mihazakazaka ny fifaninanana ary anisan’ny vahaolana ny hetra zakan’ny mpandoa sy ny fananganana fotodrafitrasa sahaza. Nisokatra, omaly ny Foara iraisam-pirenena ho an’ny fizahantany, na International tourism fair Madagascar (ITM) atao etsy amin’ny Carlton Anosy, mandritra ny efatra andro. Anjatony ny mpandray anjara, hita aty ivelany […]
Tontolon’ny asa : manana fandaharanasa ho an’ny tanora ny Cnaps
Nandray anjara nandritra ny “Andron’ny tanora sy ny asa”, natao tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps) ary nifarana, omaly. Ankoatra ny tranoheva, nisy ny famelabelarana narahina adihevitra, nifantoka tamin’ny hoe “fiahiana ara-tsosialy tsy miangatra, andraikitry ny rehetra”, notarihin-dRtoa Rakoto Ramiarantsoa Jeanine, talen’ny serasera sy ny fifandraisana ao […]
Vehivavy mpandraharaha : efa misy mpamatsy vola hanampy azy ireo
Taorian’ny fametraham-pialana nataon’ny filohan’ny vondron’ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara (Efoi-Madagascar) tamin’ny taon-dasa, nanapa-kevitra izy ireo fa hifidy izay ho solony amin’ny 4 jona ho avy izao, hatao ao amin’ny efitranon’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo (CCIA). Filoha hofidin’ireo filoha isam-paritra 15. Miandry mafy izany fifidianana izany ireo mpikambana ao amin’ny Efoi-Madagascar. Nanomboka ny […]
Feom-baliha sy antsa : raikitra ny « Valiha Mikalo »
Par Taratra sur 03/06/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Ny 11 jolay izao ka hatramin’ny 15 jolay, hotanterahina ao amin’ny Cercle Germano-Malagasy (CGM) Analakely ny hetsika « Valiha Mikalo ». Ankoatra ny atrikasa fampianarana mitendry valiha miaraka amin’ny solfezy sy fampisehoana fomba fandrafetana valiha isaky ny maraina, ny zoma 15 jolay hamaranana ny « Valiha Mikalo » no hanehoana antsa tononkalo arahina feom-baliha. Ao koa ny feom-baliha ranoiray. […]
« Précédent 1 … 1 076 1 077 1 078 1 079 1 080 … 1 209 Suivant »